Fikirakirana voka-pifidianana :: Manasa ireo kandidà miahiahy hanao fampitahana miaraka aminy ny Ceni • AoRaha
Fikirakirana voka-pifidianana Manasa ireo kandidà miahiahy hanao fampitahana miaraka aminy ny Ceni
Tamin’ny alatsinainy teo no nanomboka nisantatra ny fikirakirana an’ireo voka-pifidianana tamin’ny alalan’ ny fitanana an-tsoratra tena izy ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni). Tsy mitsaha-mitombo anefa ny fitarainana avy amin’ireo kandidà solombavambahoaka sasany ka hisorohana ny disadisa mety hitranga dia manasa azy ireo ny Ceni mba hiaraka hanao ny fampitahana.
“Antsoina avokoa ireo olona milaza fa manana antontan-taratasy manaporofo ny fisian’ny hala-bato mba hitondra izany sy hiaraka hanamarina azy ety amin’ny foibe”, hoy ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry.
Ankoatra izay, nilaza izy fa : “efa nisy tsy fitoviana hita teo amin’ireo fitanana antsoratra nalaina dika an-tsary (scannée) sy ireo fitanana an-tsoratra tena izy sasany ka efa nasiam-panitsiana izany. Nisy ny taratasy fanambaràna nalefa any amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC). Izy ireo araka izany no tompon’ny teny farany”.
Minisitry ny fitsarana :: Tsy manilika ny mety ho fanovàna ny lalàna mifehy ny HCj